China aha ọma extruded alloy 6061 6082 5083 2024 7075 gburugburu aluminom mmanya ndị na-emepụta na ndị na-ebu ya | Huifeng
Chinese soplaya nke 1050 1060 1070 1100 aluminum ọ ...
1060 0.55mm aluminom warara maka celling
High ekweghị 6061 6082 7075 2024 aluminum profaịlụ f ...
6061 6063 7075 Aluminom Pipe / Aluminom tube
Ezi aha extruded alloy 6061 6082 5083 2024 7 ...
China factory 5052 PVDF agba ntekwasa aluminum eriri igwe t ...
Corrugated mpempe akwụkwọ metal mkpuchi aluminum mpempe akwụkwọ co ...
Aluminom mpempe akwụkwọ / efere
Elu àgwà 1060 1100 3003 3105 5052 Pee PVDF painti ...
1060/1070/3003 Corrugated aluminum mpempe akwụkwọ / efere suppl ...
Enweghị nsogbu aluminum tube / anwụrụ 5052/5053/5056
OEM alloy 6061/6082/6063/6005 ulo oru alumi ...
1060/1070/1050/1100/3003 Aluminom diski / gburugburu maka k ...
Aluminom-Magnesium Alloy ịgbado ọkụ Waya
China soplaya N'ogbe 8011 aluminum foil maka p ...
Ezi aha extruded alloy 6061 6082 5083 2024 7075 gburugburu aluminum mmanya
Nkọwapụta nke aluminom mmanya
Ngwakọta: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463, 7020, 7075 wdg
Iwe: O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651
Out diamita: 10-260mm
Sharpe: Gburugburu, Square, Rectangle, Hexagonal
Dabere na ihe igwe dị iche iche dị na mkpanaka aluminom, enwere ike kewaa mkpanaka aluminom na ngalaba 8, ya bụ, enwere ike kee ha n'ime usoro 9:
1. 1000 usoro aluminom osisi na-anọchi anya usoro 1050, 1060, na 1100. N'ime usoro niile, usoro 1000 bụ nke usoro ahụ nwere nke kachasị aluminom. Ọcha nwere ike iru ihe karịrị 99,00%. N'ihi na ọ nweghị ihe ndị ọzọ dị na teknụzụ, usoro mmepụta dị mfe ma ọnụahịa dị ọnụ ala. Ọ bụ ugbu a usoro a na-ejikarị na ọrụ ndị a na-ejikarị eme ihe. Imirikiti ngwaahịa ndị na-ekesa n'ahịa bụ usoro 1050 na 1060. Ngwunye 1000 nke usoro aluminom na-ekpebi ihe kacha nta nke aluminom nke usoro a dịka ọnụọgụ abụọ nke Arab ikpeazụ. Dịka ọmụmaatụ, ọnụọgụ abụọ nke Arab nke ikpeazụ nke usoro 1050 bụ 50. Dịka ụkpụrụ aha mba ụwa si dị, ọdịnaya aluminom ga-eru 99.5% ma ọ bụ karịa ka ọ bụrụ ngwaahịa tozuru oke. obodo m nke alloy alloy technical standard (gB / T3880-2006) na-ekwuputa nke oma na ihe aluminom nke 1050 ruru 99.5%. N'otu aka ahụ, ihe aluminom nke 1060 usoro aluminom ga-eru 99,6% ma ọ bụ karịa.
2. 2000 usoro aluminom na-anọchi anya 2A16 (LY16) na 2A02 (LY6). Akara 2000 nke mkpanaka aluminum nwere nnukwu ike, ya na ọla kọpa kachasị elu, nke bụ ihe dị ka 3-5%. Usoro 2000 nke aluminom bụ nke ihe eji eji aluminom, nke anaghị ejikarị ya na ụlọ ọrụ ndị a.
2024 bụ ụdị ihe siri ike nke aluminom na aluminom-ọla kọpa-magnesium. Ọ bụ alloy na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na ike dị elu, nhazi dị mfe, ntụgharị dị mfe, na nguzogide corrosion izugbe.
Mgbe ọgwụgwọ ọkụ (T3, T4, T351) gasịrị, a na-emeziwanye ihe ndị na-arụ ọrụ igwe nke 2024 aluminum. Ya T3 ala oke dị ka ndị a: ike ọdụdọ 470MPa, 0,2% mkpụrụ ike 325MPa, elongation: 10%, ike ọgwụgwụ ike 105MPa, ekweghị ekwe 120HB.
Isi ojiji nke ogwe osisi aluminom 2024: usoro ugbo elu, rivets, ugboala ugbo ala, ihe ndi ozo na ndi ozo di iche iche.
3. 3000 usoro aluminom osisi na-anọchi anya 3003 na 3A21. Mmepụta teknụzụ nke 3000 usoro aluminom na mba m dị ezigbo mma. 3000 usoro aluminom osisi ejiri manganese mee dika isi ihe. Ọdịnaya dị n'etiti 1.0-1.5, nke bụ usoro nwere ọrụ mgbochi nchara ka mma.
4. 4000 usoro ihe eji eme aluminom Onye nnochi anya bu 4A01 4000 usoro alumini di na usoro a nwere ihe ndi ozo di elu. Ọ na-abụkarị ọdịnaya silicon dị n'etiti 4.5-6.0%. Ọ bụ nke ihe owuwu, akụkụ igwe, ihe eji eme ihe, ihe ịgbado ọkụ; obere agbaze agbaze, ezigbo nguzogide corrosion, nkọwapụta ngwaahịa: okpomọkụ na-eguzogide ma na-eguzogide ọgwụ
5. Usoro 5000 nke aluminom na-anọchite anya usoro 5052, 5005, 5083, na 5A05. Usoro 5000 nke aluminom bụ nke alloy aluminom a na-ejikarị eme ihe, ihe bụ isi bụ magnesium, na ọdịnaya magnesium dị n'etiti 3-5%. A pụkwara ịkpọ ya alloy aluminom-magnesium. Ihe ndị bụ isi bụ obere njupụta, ike mgbatị dị elu na nnukwu elongation. N'otu mpaghara ahụ, ịdị arọ nke aluminom-magnesium alloy dị ala karịa usoro ndị ọzọ, a na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ ndị a na-emekarị. Na mba m, 5000 usoro nke aluminom bụ otu n'ime usoro osisi aluminom tozuru etozu.
6. 6000 usoro aluminom na-anọchi anya 6061 na 6063 tumadi nwere magnesium na silicon. Ya mere, uru nke usoro 4000 na usoro 5000 na-etinye uche. 6061 bụ ihe eji emepụta aluminom na-atụ oyi, na-adabara ngwa ndị nwere nnukwu ihe chọrọ maka nguzogide corrosion na oxidation. . Ezi ịrụ ọrụ, mkpuchi dị mfe, na nhazi dị mma.
7. 7000 usoro aluminum mkpara na-anọchi anya 7075 na tumadi nwere zinc. Ọ bụkwa nke usoro ụgbọelu. Ọ bụ aluminom-magnesium-zinc-copper alloy, alloy a na-agwọ ọkụ, na ngwongwo aluminom siri ike nke nwere ezigbo ejiji na-eyi. O dabere na mbubata, ọ dịkwa mkpa kawanye mma maka teknụzụ mba m.
8. 8000 usoro eriri igwe Aluminom nke a na-ejikarị eme ihe 8011 bụ nke usoro ndị ọzọ, na ọtụtụ ngwa bụ aluminium aluminium, nke anaghị ejikarị eme ihe nke igwe aluminom.
“Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” ewughachi si ala-na-agba ọsọ enterprise, emi odude ke China “bilie obodo“ -PingYing asị nke Jinan obodo, ekpuchi ebe karịrị 600 acres, o nwere 3 mmepụta factory na a nkwonkwo ịmalite factory.
anyị nwere ike ịmepụta tube aluminom na-enweghị ntụpọ, ogwe osisi aluminom, ọkpọkọ aluminom, na profaịlụ ụlọ ọrụ aluminom, usoro alloy sitere na 1xxx ruo 7xxx, iwe iwe O H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 Etc.
Aluminom extrusion akụrụngwa gụnyere 3600 tọn na 2800 tọn extruding igwe, 1350 tọn 1300 tọn na 880 tọn mmadụ abụọ na-eme extruding igwe, 800 tọn laa azu extruding igwe, 630 tọn 500 tọn extruding igwe, erughị ala na-agbazi igwe, 11 rollers straighter, tube ịbịaru igwe, Igwe ihe mkpanaka, 400 KW vetikal na-enwu ọkụ, akụrụngwa akụrụngwa gụnyere ọkụ nitriding, ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, na oven nke merela agadi, setịpụrụ asatọ nke ọkụ ọkụ ọkụ na ọdọ mmiri.
Anyị agafeela usoro nyocha nke ISO9001, 2000, ma guzobe ụlọ nyocha ọkachamara na-arụ ọrụ, nke nwere onye nyocha dị iche iche, onye na-enyocha CNC tensile, microscopy dị elu, ike nyocha, wdg, yana ndị ọrụ aka ọrụ anyị ruru eru ọnụ, iji hụ na ngwaahịa ahụ dị mma. zuru ezu izute ndị ahịa chọrọ.
Izute si asịwo chọrọ bụ mgbe niile anyị na akpọrọ. Ngwakọta ngwaahịa nwere ike ịnye anyị uru karịa Jinan Huifeng aluminum Co., Ltd ga-esi ọnwụ na "inye ngwaahịa kachasị mma maka afọ ojuju ndị ahịa, nzaghachi ngwa ngwa na ọrụ zuru oke na-akwụghachi ndị ahịa ụgwọ"
Nke gara aga: China factory 5052 PVDF agba ntekwasa aluminum eriri igwe ọkpụrụkpụ 0.7mm
Osote: 6061 6063 7075 Aluminom Pipe / Aluminom tube
Aluminom Alloy Mkpanaka
Aluminum Now Mkpanaka
Aluminium Square Mkpanaka
Aluminom tubular Ogwe
Ogwe Aluminom Anodized
Iferi Aluminium Waya
Extruded Aluminom Ogwe
Oghere Aluminium Oghere
s Ogwe Aluminom Extrusion
Solid Aluminom Mkpanaka
Mkpa Aluminium Mkpanaka
Ofdị Ogwe Aluminom
Ezi aha extruded alloy 6061 6082 5083 2 ...